China Electric Hydraulic Material Handler WZYD42-8C ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya |Bonny
1. WZYD42-8C kwesịrị ekwesị maka nbudata na nbudata, nchịkọta, transshipment na nkwakọ ngwaahịa nke ahịhịa nchara, ogige wharf, ogige ụgbọ oloko, ọgwụgwọ mkpofu na ụlọ ọrụ ọkụ.
2. Motors nke WZYD42-8C bụ ndị a maara nke ọma ika na China, ndị Motors nwekwara ike họrọ dị ka ndị ahịa chọrọ na mpaghara ike nkọwa.WZYD42-8C nwere akụrụngwa hydraulic ika ama ama n'ụwa na akụkụ.
3. WZYD42-8C nwere ọrụ nhọrọ dị iche iche, nke nwere ike gboo mkpa nke ndị ahịa n'ụzọ zuru ezu.Gụnyere: eriri igwe, ụgbọ elu na-ebuli elu, ụgbọ ala kwụ ọtọ, usoro onyunyo vidiyo / ihe ngosi, sistemu igwe eletrọnịkị, sistemu nchọpụta radieshon, sistemu mmanu mmanu akpaka, egwu rọba, wdg.
4. Nhọrọ dị iche iche nke ngwá ọrụ, gụnyere: njide nke ọtụtụ ezé, njide shea, njide osisi, ọkụ eletrik, hydraulic shears, hydraulic clamp, wdg.
5. Uru nke ngwaọrụ na-arụ ọrụ: BONNY ihe eji eme ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka oghere oghere na ihe nkedo nkedo, ngwaọrụ na-arụ ọrụ na-esiwanye ike, a na-ewepụkwa ebe mgbakasị ahụ;nhazi nke cylinder mkpisi okpukpu abụọ na imewe ike nke ebe nkwado osisi ahụ, ike na-ebu ya na-emeziwanye, ike na-eguzogide torsion ma kwụsie ike.
6. Uru nke usoro hydraulic: Onye na-ahụ maka ihe onwunwe BONY na-anabata usoro hydraulic nke nfuli okpukpu abụọ na sekit abụọ iji kesaa ike nke isi iyi ike nke ọma, ma na-edozi mmepụta ike nke usoro dị ka ibu ahụ si dị, ma na-arụkọ ọrụ pụrụ iche. valvụ multi-way iji nweta arụmọrụ dị elu nke ọrụ, ma ghọta oke nchekwa ike n'otu oge.
WZYD42-8C bụ ihe na-eji ọkụ eletrik 43-ton nke BONNY.Onye na-ahụ maka ihe BONY bụ ngwa ọrụ pụrụ iche dị elu maka nbudata na nbudata.Emebere ya nke ọma maka ọnọdụ nbudata na ibutu.tumadi na-agụnye: njikarịcha nhazi nke ngwaọrụ na-arụ ọrụ na igwe dum, njikarịcha nke usoro hydraulic, njikarịcha nke undercarriage na nguzozi, wdg, ọ bụghị mgbanwe dị mfe nke ndị na-egwupụta ihe.
Ibu igwe t 43.7
Enyere ike kW 132 (380V/50Hz)
Oke.eruba L/min 2 × 208
Ọsọ ọsọ rpm 6.4
Ọsọ njem km/h 2.2 / 3.6
Oge ịgba ígwè ọrụ s 15-20
Oke.njide omimi mm 7458
1.What bụ arụ ọrụ arụmọrụ nke WZYD42-8C?
Nkezi arụmọrụ ọrụ nke BONNY WZYD42-8C nwere ike iru 240t / h site na mgbako ịme anwansị.Dị ka data nzaghachi ahịa nke ndị ahịa na ndị na-ere ahịa gasịrị: oge ​​ịkwatu C60 gondola jupụtara na ore (ibu 60t) bụ nkeji 14 ~ 15, oge ịkwatu gwongworo juputara na nchara 40t bụ nkeji 9-10. .N'ezie, nke a bụ data mgbe onye ọrụ nwere nkà na-arụ ọrụ.
2.Ọ bụrụ na achọrọ m nnukwu ọrụ na-arụ ọrụ na WZYD42-8C, nke a ọ ga-ekwe omume?
Ọ na-ekwe omume n'ụzọ doro anya, mana anyị kwesịrị ịma data akọwapụtara, na oke ọrụ ka ukwuu pụtara ikike ịwụ pere mpe, nke pụtara ịrụ ọrụ dị ala.Ọdịiche a kwesịrị ka atụnyere ma tụọ ya.Na ụkpụrụ, anyị anaghị akwado ya n'ihi na ịba ụba nke na-arụ ọrụ nso ga-achụ àjà dị ukwuu ọrụ arụmọrụ, n'ihi na WZYD42-8C nwere ike ugbua izute ọtụtụ n'ime ọrụ nso chọrọ.Ọ bụrụ n'ezie na ọ dị ntakịrị anya, ọ bụghị ịba ụba oke ọrụ agaghị emetụta arụmọrụ arụ ọrụ nke igwe.Echefula, onye na-ahụ maka ihe nwere ike ịga ije.
3.Ọ bụrụ na m chọrọ nnukwu njide ikike iji nweta ọrụ arụmọrụ dị elu, nke a ọ ga-ekwe omume?
Nke mbụ, anyị kwesịrị ịghọta nhazi nke saịtị ọrụ ma gbalịa izere ebe ndị dị ize ndụ;Nke abụọ, anyị ka na-akwado ịhazi ndị ọrụ ọzọ iji nyere aka mgbe igwe na-agagharị iji hụ na eriri ahụ na-adị mgbe niile n'ebe nchekwa;Nke atọ, ị nwekwara ike ịhọrọ ịwụnye eriri eriri USB nke nwere ike ijikwa nkwụsị na nkwụsị nke eriri ahụ, na ọbụna usoro nyocha vidiyo nke nhọrọ nwere ike ịwụnye iji hụ na onye ọrụ nwere ike ịmata kpọmkwem ebe eriri USB dị n'oge ọ bụla.
4. Ogologo oge ole ka eriri nwere ike ịdị?
Ogologo eriri USB a tụrụ aro bụ 100 ~ 150 mita, na nke kachasị ogologo enweghị ike gafere mita 200.Nke a bụ n'ihi na eriri USB ga-ebelata ka ogologo na-abawanye.N'ezie, ị nwekwara ike ịbawanye voltaji nke ọdụ ọkụ ọkụ iji dozie nsogbu a.
5.Kedu ụdị eriri nke onye na-ahụ maka ihe onwunwe BONNY na-eji?
Ụdị onye na-ahụ maka ihe dị iche iche ga-eji ụdị eriri dị iche iche.BONNY ga-akwado ụdị ọdabara mgbe ịzụrụ.
Nke gara aga: Onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe igwe eletriki eletrik WZYD33-8C
Osote: Onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe igwe eletriki eletrik WZYD46-8C